Kana ukasarudza kupfekedza kamba yako yezhizha kana imba yeimba ine bhuruu yebhuruu, iwe unofanirwa kuzviita maererano nemitemo yese uye kunyatsoongorora. Kukurira spruce pane imwe ivhu rakawira pasi pemaoko ako, haugoni. Semuenzaniso, haufaniri kukura kuputika munzvimbo umo mbatatisi ichangobva kukura, izvi zvinogona kukonzera utachiona hwemichero nefungus ye genus Fusarium. Pane mitemo yekutarisira nekurima kwemuti uyu.
Kudyara kweruvara rwebhuruu
Kusarudzwa kwevhu kunodyara mbeu kunobva kune rudzi rwebhuruu rwepruruki. Pamhando dzakasiyana-siyana, ivhu rakawandisa kwazvo rinodiwa, asi pamiti yemisipiresi iyo haigoni kushanda, korona haigoni kuumbwa zvakanaka uye muti unotambanudza zvakanyanya kusvika kumusoro.
Hazvibvumirwi kudyara ruvara rwebhuruu mumatunhu eku calcareous. Kana ivhu rakadaro riri panzvimbo, rinofanirwa kugadziriswa usati wasima. Aididifying agents anogona kuva ammonium nitrate, ammonium chloride kana ammonium sulfate. Asi iwe unofanirwa kuita zvose nekuenzanisa, zvisinei iwe unogona kukuvadza kuparadza mbeu, spruce inosarudza ivhu risina simba.
Usakanganwa pamusoro pemvura yakanaka. Kuronga kunogona kuve kwakanyanya kunyanya: kuputsika brick kana kubviswa. Izvi zvinodzivirira kunyura uye kuora kwemidzi mune kunyanya kunaya kwemvura. Mukuwedzera kune ivhu rakanyanyisa richikwira, nokuti midzi yepruce inokuvadza uye inooma kunze.
Kana uchidyara, inofanira kufungwa kuti iyo inotumbuka inowedzera kukura nokukurumidza. Hazvigoneki kudyara muti kwazvo. Iyo inonyanya kubudirira iyo ibanga riri pakati pebhuruu rwepruce michero yemamita 2-3. Kana kuiswa kwacho kuchidikanwa, unogona kuzviita chero nguva yegore. Asi iyo inofadza zvikuru inofungidzirwa kuva Marato, apo ivhu rakanyatsoputika.
Iyo yakadzama yakadzama yekudyara isvika 55-65 masikati. Izvi zvinowanzoonekwa kune marudzi ose e spruce. Kana uchifunga nezvekusiyana kwakanaka kwemuti mumwe nomumwe, pane zvinotevera mazano: gomba rinofanira kunge riri pamusoro pe-sm uye zvakanyanya uye 20 sm kupfuura yakawanda mudzi wekodha. Kana uchidyara, usunungurire ivhu mubako rine masendimita 10. Edza kudyara miti yemisipiresi munzvimbo dzakasununguka, nokuti chimiro ichi chinofarira zuva.
Dutu rebhuruu: Kuchengetedza
Nzira yekukura sei ruvara rwebhuruu rwekuve negodo kune vavakidzani vose? Zvechokwadi, unoda kumuchengeta zvakanaka. Makore mashanu okutanga, zvakakosha kudyisa muti nemamineral fertilizer kamwechete pagore. Muchizadziro inofanira kubudiswa mukati mekunze nguva pfupi mushure mokunge pasi rapera. Yeuka mutemo mukuru: usambozadza spruce nemafuta matsva!
Mumakore ekutanga mashanu nemakore mashanu, edza kunyatsotarisa korona yepruce. Bvisa matavi akaoma uye maronda. Izvi zvinofanira kuitika mukati megore nekupura. Munguva yemachando ezhizha, nguva dzose shandisai mbeu yacho uye musunungure ivhu mumudzi wenharaunda.
Kana uri wekutanga, zvakaoma kukura ruvara rwebhuruu, sezvinoita muti uchawana kubva pamamiriro ekunyoro emurairi kusvika kumamiriro ezvinhu akaipa edzimba rako uye kukanganisa kuduku kunogona kukudhura mbeu.
Kunyanya pedyo zvakanyatsoongorora midzi. Kana uchidyara muti munguva yechando kana munguva yechando, shandisai muti inoda kusvika kusvika 12 nguva yenguva yose yezvinomera. Zvose zvinoenderana nehutano hwemamiriro okunze nekuwanda kwemvura. Kunwa mvura yakawanda mushure mechando kana kubuda kwemvura kunotarisirwa, kunyange munguva yekudonaya. Shandisai mbeu yacho zvakanaka mangwanani kana manheru mushure me18.00. Mvura inofanira kunge iri mvura inodziya chete.
Bhururu rebhuruu: kubereka
Iwe unogona kukura ruvara rwebhuruu kubva kumbeu kana kudyiwa. Kana ukasarudza kukura ruvara rwebhuruu kubva kumbeu, unofanirwa kutanga kudzidzira mwedzi yakawanda usati wasvika. Pakati pechando chando, unoda kubvisa mbeu nekugadzirira. Mbeu dzinoda kuiswa zuva rimwe mumvura kana muto we pink we potassium permanganate. Mushure mekunge uchinge wadya mbeu inowanikwa pasi pechando. Izvi zvinokonzera kuoma kwechimiro munguva yemberi. Dyara mbeu muvhu risina kusimba sejecha kusvika pakadzika 1 cm Pashure pemakore 20-25, zvinomera zvinogona kuonekwa. Dyara mbeu inofanira kupiwa frosts: majeka anofanira kukwira shure kwekuguma kwechando. Kudyara mbeu inofanira kunge yakakwana, yakasvibira shoma nenzira yakadaro kune chikamu chemasendimita gumi nemashanu pakati pavo.
Scallop akasimuka - kugadzirira kwechando
Fluffy fodya - kudyara uye kutarisira
Dombo rine maoko avo
Lubistok - kukura uye kuchengetedza muti wemishonga
Dollar muti - mashizha matsvuku
Nzira yekuita sei mukati mechipinda?
Ko kofi inokura kupi?
Spring top dressing ye strawberry
Amoniya doro mumunda uye munda wemiriwo
Ungatora sei tomate?
Platycodone - kudyara nekutarisira munzvimbo yakazaruka
Milk Millet - Kutarisira
Nzira yekuita kuti maruva atumbuka sei?
Zvitambo zvevakadzi vanozvitakura
Murume uyu mhandara
Geranium - mashizha akaomeswa - chii chaunofanira kuita?
Joan Rowling nekuda kwekunamatira kusingabatanidzwi kubva kune runyorwa rwevana mabhiriyonire Forbes
Ungasarudza sei maketeni eimba yekugara?
Zvinhu zvinoshamisa zvinogona kuwanikwa chete muJapan
Riabal kuvana vacheche
Ndinogona here kutora pamuviri mushure mokunge ndaenda kumwedzi?
Hydrangea paniculate mumamiriro ekugadzira nyika
Kutabs nenyama muAzerbaijani chimiro
Kuiswa kwemasvingo emadziro
Amaranth mafuta - 4 mapeji akaisvonaka echeganda rakakwana uye vhudzi
Saladi yechipfuva chenyama
Muhupenyu hwaAmber Heard wakaonekwa murume mutsva
Nekupi kupfeka zvidzitiro?
Keds pachikuva - sezvavanodanwa uye nechokufuka?
Engry Berdz from plasticine